Iphupha malunga nohlaselo lwabanqolobi Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Uhlaselo lwabanqolobi sesinye sezona ziganeko zoyikekayo nezothusayo ezinokwenzeka. Nangona uhlaselo ikakhulu lunezandi eziphantsi kwezopolitiko, ekugqibeleni akukho nto iyenye ngaphandle kobundlobongela obuphambili. Kubunqolobi, abantu abamsulwa bayoyika okanye baxokozele, benzakale okanye bade babulawe, kanye njengemfazwe. Umzekelo wesoyikiso esikhulu sobunqolobi kukuhlaselwa kweWorld Trade Center eNew York ngoSeptemba 11, 2001: bangaphezulu kwama-2.700 XNUMX abantu abaswelekileyo.
Amaphupha apho uhlaselo lobunqolobi lubonwa okanye lubonwa khona kaninzi lubonwa njengoloyikisayo. Ngaloo nto kuza uloyiko lokuba iphupha liye laprofetwa kwaye liza kuzaliseka kungekudala. Nangona kunjalo, oku akunjalo. Endaweni yoko, uphawu lwephupha lunenkohlakalo encinci, kodwa lunentsingiselo enzulu.
1 Uphawu lwephupha «uhlaselo lwabanqolobi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uhlaselo lwabanqolobi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uhlaselo lwabanqolobi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uhlaselo lwabanqolobi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukubona okanye ukufumana amava ohlaselo lwabanqolobi ephupheni kwii-greats ezisondeleyo imvakalelo phantsi. Kwixesha elizayo elingekude, ubomi bokwenyani bomntu ochaphazelekayo buza kuyeka ukusebenza kakuhle, kodwa kuya kwenzeka into engalindelekanga.
Nangona kunjalo, iphupha akufuneki loyike ngale nto: ngokwenkcazo ngokubanzi, umsitho uya kutyhileka ngokonwaba ekugqibeleni kwaye mhlawumbi ungakusa ebomini, ukufundise okuthile.
Nangona kunjalo, ukuba umntu ulixhoba elithe ngqo lokuhlaselwa ngabanqolobi ephupheni, umzekelo ngebhombu okanye ngeloli elixhwiliweyo, kufuneka alunyukiswe. Kule meko, kunokwenzeka ukuba ayizizo zonke izinto kubomi bokwenyani ezihamba kakuhle kwaye zinesiphelo esonwabisayo. Unako ukuza Iingxaki kunye neengozi zokuphupha, ezingafaniyo. Ke ngoko, kunokuba luncedo ukulungiselela ubunzima kwangaphambili.
Kwakhona, amaphupha abagrogrisi apho igazi elininzi liphuma khona ilahleko Iingoma. Oku kunokuba lishishini, mali okanye kuchaphazele ubomi babucala babo baphuphayo.
Ngasemva, amaphupha apho wena uhlasele abagrogrisi ayoyikisa ngokukodwa. Nangona kunjalo, oku kushiya Hayi ifunyenwe kubuntu obunobundlobongela, kodwa kukholelwa ngokubanzi ukuba iyenzeka Iingxaki ukulumkisa. Umntu ekuthethwa ngaye uchitha ixesha elininzi, amandla kunye nomgudu kwinto eya kuthi ekugqibeleni isilele. Kuya kufuneka ucinge malunga nezinto ezinokubonakala zingenathemba ebomini bakho bokwenyani kwaye wahlukane nazo.
Uphawu lwephupha «uhlaselo lwabanqolobi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba uhlaselo lwabanqolobi lubonwa kumgama okhuselekileyo ephupheni, umzekelo, ngokwendlela yokusebenza kwengqondo, oku kubonisa ulwakhiwo, ubuntu ngaphantsi. Ukuphupha akunakuphazanyiswa yiyo nantoni na ebomini kwaye uneemvakalelo zakho eziphantsi kolawulo. Ikwahlala ithembekile kuzo zonke iimeko.
Ukuchasana kusebenza ukuba uhlaselo lobunqolobi lubakho ngqo ephupheni. Kule meko, isimboli inokubonisa ukuba loo mntu kuthethwa ngaye woyika into kwaye ukungenisa kufuneka ube sengozini ngokweemvakalelo. Mhlawumbi kunokwenzeka into ethile obungayilindelanga kungekudala.
Uphawu lwephupha «uhlaselo lwabanqolobi» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokutolika, uhlaselo lwabanqolobi ephupheni lunokuba luphawu lokulahlekelwa kukabani. ukulunga ngokomoya zimele.